लक्ष्मी इक्वीटी फण्डको सूचिकृत शेयरमा लगानी बढ्यो | गृहपृष्ठ
Home लगानी लक्ष्मी इक्वीटी फण्डको सूचिकृत शेयरमा लगानी बढ्यो
on: १२ चैत्र २०७५, मंगलवार १४:२२ लगानी
लक्ष्मी इक्वीटी फण्डको सूचिकृत शेयरमा लगानी बढ्यो
चैत १२, काठमाडौं (अस) । लक्ष्मी म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित लक्ष्मी इक्वीटी फण्डले माघ मसान्तको तुलनामा फागुन मसान्तमा सूचिकृत शेयरमा लगानी बढाएको छ । फागुन महीनामा ६९ कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको छ ।
योजनाले माघ मसान्तको तुलनामा रू. २ करोड ५८ लाख शेयर लगानी बढाएको हो । माघ मसान्तमा रू. ७९ करोड ६५ लाख लगानी गरेको थियो भने फागुन मसान्तमा रू. ८२ करोड २४ लाख लगानी गरेको छ । योजनाले फागुन मसान्तमा बैंक मौज्दातमा रू. १८ करोड ५४ लाख र बैंक मुद्धतिमा रू. ६ करोड लगानी गरेको छ । योजनाको प्रति एकाइ खुद सम्पत्ति मूल्य रू. ८ दशमलव ६५ रहेको छ । माघ मसान्तमा एनएभि रू. ८ दशमलव ५५ रहेको थियो ।
योजनाको प्राप्त भइसकेको आम्दानी रू. ३ करोड ४५ लाख रहेको छ भने प्राप्त हुन बाँकी रकम रू. २३ करोड २५ लाख रहेको छ । योजनाले फागुन मसान्तमा रू. २१ करोड ७४ लाख कुल ब्यय गरेको छ । योजनाको व्यवस्थापक लक्ष्मी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
११ बैशाख २०७६, बुधबार १४:३९